काठमाडौँ । के तपाईं काठमाडौँका अस्पतालभित्र या अस्पताल बाहिर सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग वा बेचबिखन त गरिरहनु भएको छैन ? सावधान ! यदि यस्तो हो भने अब भने तपाई प्रहरीको फन्दामा पर्नुहुनेछ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार काठमाडौँको ठूला ११ सरकारी अस्पतालमा आजदेखि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन) ऐन २०६८ ले व्यवस्था गरे पनि व्यावहारिकरुपमा लागू हुन नसकेकाले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको अगुवाइमा पहिलो चरणमा काठमाडौँका ठूला ११ अस्पतालमा कार्यान्वयन गर्ने गरी अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।
आज निजामती कर्मचारी अस्पतालबाट उक्त कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको परिसरका प्रमुख उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
अस्पतालको १०० मिटरसम्मै सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्नसमेत नपाइने प्रहरीले जनाएको छ ।
सार्वजनिक स्थान, सरकारी कार्यालय, अस्पताल उद्योग, कलकारखाना, शिक्षण सङ्घसंस्था, विमानस्थल, होटल, सिनेमा घरलगायत क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न पाइँदैन । अन्य व्यक्तिलाई असर पर्ने गरी घर तथा निजी सवारी साधनभित्रसमेत धूमपान गर्न नहुने ऐनमा उल्लेख छ ।
प्रयोगकर्तालाई मात्रै नभई समाजलाई नै असर पार्ने भएकाले सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन) ऐन २०६८ ऐन कार्यान्वयनका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्न लागिएको परिसरका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए ।
वासिङ्टन । सुर्तीजन्य दुव्र्यशन घटाउन २१ बर्षमुनिका व्यक्तिलाई धुम्रपान गर्न निषेध गर्ने कानून ल्याउने विधेयकमा अमेरिकी राज्य वासिङ्टनले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेको छ । यससँगै अमेरिकामा १८ बर्ष उमेर समूहभित्रका युवालाई लक्षित
धुम्रपानरहित दिवस : धुम्रपान त्यागौँ, स्वस्थ बनौैँ
काठमाडौँ । धुम्रपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने जानेर पनि धेरै मानिस यसको लतमा फँसेका छन् । यसको प्रयोगले वर्षेनि हजारौँ मानिस क्यान्सर, मुटु, हृदयाघात, स्ट्रोकजस्ता समस्याबाट ज्यान गुमाउँछन् । विश्वमा २१
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकालाई धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थ मुक्त शहर घोषणा गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी महानगरलाई स्वस्थ शहरको रुपमा विकास गर्न धुमपान
एक वर्षभित्र धुम्रपानरहित काठमाडौँ शहर बनाइने
काठमाडौँ । काठमाडौँ शहरलाई ८५ प्रतिशत धुम्रपानरहित बनाइने भएको छ । नसर्ने रोग खासगरी मुटु रोग, क्यान्सर, स्टोक, मानसिक रोग, मधुमेह, मिर्गौला खराबलगायतका रोगले मानिसको मृत्युदर बढ्न थालेपछि त्यसको मुख्य